जाजरकोटमा विकासले देखाएको समृद्धि, आशा र भरोसा – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७८, आईतवार १७:१०
नेपालगञ्जबाट नुन बोकेर बारेकोट गाउँपालिका–५ पाखा घरमा पु¥याएको दिन सम्झँदा खम्बहादुर सिंहलाई अचम्म लाग्छ । भारी बोक्दा टाउकामा नाम्लोका खतका कारण सिंहको कपाल समेत टाउकाबाट हराएका छन् ।
उहाँको टाउकामा कपाल हराएसँगै अहिले बारेकोटका गाउँगाउँमा गाडी, मोटरसाइकलका धुन बज्न शुरु भएको छ । सिंह भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पालामा सबै खालका परिवर्तन मात्र होइन, विकासको आधार पनि देख्न पाइयो ।” गाउँभरिका मानिस जम्मा भएर रेडियोमार्फत बोलेको आवाज सुन्दा अचम्म मान्ने आफ्नो पुस्ता अहिले मोबाइलमार्फत एफएम रेडियोदेखि टर्च, समयसमेत हेर्न पाउँदा अनौठो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
पेट दुख्दा होस् वा, ज्वरो आउँदा किन नहोस् ? धाँमीझाँक्रीको सहायता लिनुपर्ने अवस्थाबाट आएका सिंह अहिले सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिनासाथ घरबाट पाँच मिनेट नजिकैको दूरीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँलाई छोरा र नाति पुस्ताले हरेक नयाँ कुराको जानकारी मात्र दिँदैनन्, इन्टरनेटका माध्यमबाट सबैखालका पुराना कुरा देखाएर पुरानो कुराको यादसमेत दिलाउने गरेका छन् । बारेकोटदेखि एक महिना लगाएर नेपालगञ्ज र नेपालगञ्जबाट एक महिना लगाएर बारेकोट पुग्ने सिंह आफ्नो पुस्ताको विगत सम्झँदा सपना झैँ लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । अहिलेको जस्तो ठाउँ–ठाउँमा पुल, पुलेसा नभएका कारण काठको लाप्कोबाट नदी तर्नुपर्ने, होटल नहुँदा ओडारको बास बसेको पीडा उहाँसँग अहिले पनि झलझली सम्झना आउने गर्दछ ।
बारेकोटबाट नेपालगञ्ज जाँदा बाटामा लुकाएर राखेको मकै, फापरको पिठो लिएर फर्कंदा जङ्गली जनावर र मुसाले खाइदिँदा कैयन दिन भोको पेट आफूभन्दा बढी तौल बोकेर हिँड्ने परेको पीडा उहाँसँग सही नसक्नु छ । दुई महिनासम्म घरबाट छुटिएका आफन्त घर नपुग्दा आफन्तले पठाएको रैवार बाटोमा सुन्न पाइएको उहाँले सम्झना गर्नुभयो ।
“भारी बोक्दा मुटुमा रगत जमेर मरिने रहेछ, आजभोलि पो थाहा भयो, हामी ऊ बेला भूतप्रेत र राक्षसले खाएको भन्दै विश्वासमा अडिएका थियौँ”, नलगाड नगरपालिका–८ का हरिबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “आजभोलि सदरमुकाम जाँदा होस् वा अन्य ठाउँमा जाँदा किन नहोस् ? मोटरसाइकलमा जान्छु र आउँछु, विगतमा नुन र कपडा बोकेका बाटो राम्रोसँग हेर्ने गर्छु ।”
सदरमुकामभन्दा बाहिरका सबै स्थानीय तहका सर्वसाधारण अहिले कच्ची बाटामै यातायातका साधनमा चढेर निश्चित गन्तव्यमा जाने र आउने गर्छन् । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता गाउँमै हल गर्दै अगाडि बढेको सर्वसाधारण बताउँछन् । अहिलेको विकास र अन्य परिवर्तन आउन धेरै पुस्ताको बलिदानी, भोको पेट र साधनाले काम गरेको बारेकोट –५ का पूर्व शिक्षक जनकबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
युवा नेता तथा जनयुद्धले जन्माएका पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पहुँच राख्ने अवस्थामा पुगेपछि विकासको विजारोपन भएको यहाँका बासिन्दाको विश्वास छ । सदरमुकामसम्म कच्ची सडक निर्माण भएकामा २०६५ सालयत्ता सदरमुकामसम्म सडक कालोपत्र भएको छ । सबैभन्दा जोखिम र १३ वर्षसम्म निर्माण हुन नसकेको राकमस्थित भेरी पुल बस्नेत गृहमन्त्री हुँदा नै भारी दबाबका बीचमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताइन्छ ।
छिन्चु – जाजरकोट खण्डको भेरी करिडोरका सबै ठाउँमा पुल निर्माण भएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, भेरी करिडोर र लुम्बिनी–रारा जोड्ने सडकको समेत काम भइरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोट खण्डमा कालोपत्रको काम धमाधम चलिरहेको छ । विसं २०६४ भन्दा अगाडि सदरमुकाममा एसइईको परीक्षा दिन आउनेदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । तीन ठाउँमा क्याम्पस र स्नाकोत्तर पढाइ हुने एक क्याम्पस मात्र होइन, प्राविधिक धारको कृषि, भेटेनरी पढाइ जिल्लामै हुने गरेको छ ।
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको जाजरकोट खण्ड भरी पुल निर्माण कार्य जारी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख धु्रव झाले जानकारी दिनुभयो । झाका अनुसार जाजरकोटमा हुने विकास निर्माणमा कुनै ठाउँमा पनि अवरोध नहोस भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतको ठूलो दबाब छ ।
त्यस्तै नलगाड जलविद्युत् आयोजना (४१७ मेगावाट) को मुआब्जाको काम सकिएको छ भने अन्य सुरुङ निर्माणका लागि जाँचको काम जारी छ । जिल्लाको खजिन पदार्थ प्रशोधन तथा व्यवस्थापनका लागि अहिलेको बजेटमा समेत व्यवस्थापन भई काम शुरु गर्ने उद्देश्य राखिएको पूर्वमन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । विसं २०६५ यता विकास निर्माणका लागि हालिएका जगको परिणाम देखिन थालेको पूर्वमन्त्री बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
जिल्लाका चार ठाउँमध्ये एक ठाउँमा विद्युत्को सवस्टेशन निर्माण पूरा भइसकेको छ भने अन्य दुई ठाउँमा निर्माण कार्य जारी छ । अन्य दुई ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणको काम जारी रहेको विद्युत् प्राधिकरणका विशाल लामिछानेले बताउनुभयो ।
करोडौँको राजस्व छली विफल